Cimilada sii kululaaneysa ayaa qalaleysa Badda Caspian | Saadaasha Shabakadda
Kulaylka adduunka ayaa qalalaya Badda Caspian
Cimilada sii kululaaneysa waxay ku keenaysaa ifafaalo cajiib ah meeraha oo dhan sida tan aan ka hadlayno. Badda Caspian waa jidhka ugu badan ee biyaha dareeraha ah oo ku taal gudaha gudaha qof kasta oo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee, kuleylka adduunka awgood, waxay tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu baxaysaa labaatankii sano ee la soo dhaafay.
Kordhinta heer kulka ee la xiriira isbeddelka cimilada iyo kuleylka adduunka ayaa sababaya in Badda Caspian ay lumiso mug ballaaran oo biyo ah. Cawaaqib noocee ah ayey tan yeelan kartaa?
1 Daraasad ku saabsan Badda Caspian
2 Cawaaqibka kululaynta adduunka
Daraasad ku saabsan Badda Caspian
Heerarka biyaha ee Badda Caspian hoos u dhacday ku dhowaad 7 sentimitir sanadkiiba laga bilaabo 1996 ilaa 2015, ama ku dhowaad 1,5 mitir wadar ahaan, sida ku cad natiijooyinka cilmi-baarista cusub. Heerka hadda ee Caspian Sea wuxuu kaliya 1 mitir ka sarreeyaa heerka taariikheed ee ugu hooseeya ee la gaarey dabayaaqadii 1970s.
Uumi-baxa biyaha ka soo baxa Badda Caspian-ka ayaa lala xiriiriyay wax ka sarreeya heerkulka hawada ee caadiga ah dusha sare ee badda. Xogta daraasadda waxay muujineysaa in heerkulka Badda Caspian uu ku kordhay hal darajo inta udhaxeysa laba xilli oo la tixgeliyey intii u dhaxeysay 1979-1995 iyo 1996-2015.
Cawaaqibka kululaynta adduunka
Cawaaqibta ka dhalatay kororka kuleylka ee ay sababtay kululaynta adduunka waxay horseed u tahay in la waayo tiro badan oo harada biyo-milixeedka iyo hoos u dhaca ku yimid in noocyada ku nool ay dhibtoon doonaan iyadoo heer-kulka meeraha uu sii kordhayo
Badda Caspian waxaa ku xeeran shan ummadood waxaana ku jira kheyraad dabiici ah iyo duurjoog kala duwan. Sidoo kale waa il muhiim u ah kalluumeysiga dalalka ku xeeran. Marka hoos u dhaciisa waxay yeelan doontaa saameyn mustaqbalka.
Waa wax cajiib ah in la arko sida kululaynta adduunku u awoodo inay uumi baxaan badaha halkaas ku haray malaayiin sano sannado yar gudahoodna ay sii libdhayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Kulaylka adduunka ayaa qalalaya Badda Caspian
Duufaanta Irma, oo ah tii ugu xooganeyd taariikhda ee Atlantik, waxay geysaneysaa khasaaro aad u badan
Maxay ku kala duwan yihiin duufaannada iyo duufaannada